India kuti ibatane neChina mukurambidza ese akavanzika cryptocurrencies
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » India kuti ibatane neChina mukurambidza ese akavanzika cryptocurrencies
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • India Kupwanya Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
India iri mulling Bitcoin, mamwe cryptocurrencies kurambidzwa
India kubatana neChina mukurambidza yakavanzika cryptocurrencies
Kurambidzwa kwekare kweIndia pa cryptocurrency kwakapidigurwa muna Kubvumbi 2020, zvichitungamira kumusika wecryptocurrency unowedzera.
Bhiri idzva raizogadzira hurongwa hwekumisikidza mari yedhijitari yepamutemo uye 'kurambidza mari dzese dzepachivande muIndia' rawedzerwa kuchirongwa chiri kuuya cheparamende yeIndia.
Chirongwa chekurambidza zvese zvakavanzika cryptocurrencies chakauya mazuva mashoma apfuura Mutungamiriri weIndia, Narendra Modi zvinhu zvinokakavadzana zvakaita sebitcoin zvinogona kuguma zvave 'mumaoko asina kururama uye 'kukanganisa pwere dzedu.'
Chikumbiro chitsva chakaziviswa nhasi neLok Sabha, nhengo ye Indiaimba yevamiririri. Zvichange zviri mugwara reparamende parichasangana musangano wechando musi wa29 Mbudzi.
IndiaKurambidzwa kwekare kwekristptocurrency kwakapidigurwa muna Kubvumbi 2020, zvichitungamira kumusika uri kusimukira wecryptocurrency. Kunyange zvazvo pasina data yepamutemo iripo, fungidziro yeindasitiri inotaurwa neReuters yakaisa nhamba yevaridzi vekriptom muIndia pakati pe15 ne20 miriyoni vanhu, nekubata kwakakosha kusvika ku400 bhiriyoni rupees (5.4 bhiriyoni).
Hurumende yepakati yeNew Delhi yanga isinganyanyi kufarira, zvisinei. Vhiki rapera, PM Modi akati "zvakakosha kuti nyika dzese dzegutsaruzhinji dzishande pamwe chete" pamari yekriptofity yakadai se bitcoin, uye "ona kuti haipere mumaoko asina kunaka, izvo zvinogona kukanganisa pwere dzedu."
India nechepakati bhanga yakaratidza "kunetsekana zvakakomba" pamusoro private cryptocurrencies akadai bitcoin kana ethereum, uye akati muna June akanga achishanda pachayo digitaalinen mari, kuti vaunzwe pakupera kwegore.
China yakanyatso kurambidza bitcoin munaGunyana, ichirambidza mabasa ese ane chekuita nekrispto pamba uye kurambidza kutengeserana kune dzimwe nyika kuita bhizinesi nevashambadziri venyika.
Zvichakadaro, nyika yeCentral America yeEl Salvador yakazivisa bitcoin pamutemo nyoro pamwe chete nedhora reUS, uye yakamisa zvivakwa zvemigodhi ye crypto inopihwa simba regeothermal kubva kumakomo anoputika.